XOG: Afarta Fantastiga Ah, Todobada Layaabka Leh- Qiimayn Lagu Sameeyay Ciyaartoyda Abid Ugu Fiican, Messi & Ronaldo Oo Boodhka Lagu Qasay. - Gool24.Net
XOG: Afarta Fantastiga Ah, Todobada Layaabka Leh- Qiimayn Lagu Sameeyay Ciyaartoyda Abid Ugu Fiican, Messi & Ronaldo Oo Boodhka Lagu Qasay.
March 22, 2020 Mahamoud Batalaale
Iyada oo kubbada cagta aduunku hakad ugu jirta saamaynta coronavirus ayuu wargayska AS ee dalka Spain ka soo baxaa qiimayn ku sameeyay ciyaartoydii abid ugu fiicnaa iyada oo darajooyin kala duwan la siiyay.
Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa seegay safka hore ee qiimaynta AS ee ciyaartoydii abid ugu fiicnaa iyada oo lagu qiimaynayo wax qabadkii ugu muhiimsanaa ee saddexda arimood ee kubda cagta go’aamiya.
Ku guulaysiga koobabka aduunka iyo Champions League iyo la mid ah abaal marinta Ballon d’Or oo laysku daray ayaa lagu qiimeeyay ciyaartoyda kubbada cagta abid ugu soo fiicnaa taas oo Messi iyo Ronaldo sabab ugu noqtay in ay meel danbe soo galeen.
Afar halyay oo kubbada cagta soo maray waxaa loo asdeeyay magaca ‘fantastic four’ ama farta fantastiga ah waxayna kala yihiin Pele, Alfredo Di Stefano, Johann Cruyff iyo Diego Maradona, waana afarta shaqsi ee inta ugu badan aduunka laga midaysan yahay in ay yihiin kuwii kubbada cagta abid ugu fiicnaa.
Sababta qiimaynta afartan shaqsi kaalmaha ugu sareeya ee kubbada cagta lagu siiyay waa in ay ka mid yihiin 7 ciyaartoy oo kaliya oo ku soo wada guulaystay Champions league, koobka aduunka iyo Ballon D’Or waxaana qiimaynta kowaad la siiyay Pele, Alfredo Di Stefano, Johann Cruyff iyo Diego Maradona.
Kadib waxaa lagu xigsiiyay todobada cajiibka ah oo ay markale ka maqan yihiin Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi kuwaas oo lagu qiimeeyay in ay afartii halyay ee hore ku soo xigaan.
Todobada cajiibka ah waxaa lagu magacaabay Bobby Charlton, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Paolo Rossi, Kaká, Ronaldinho iyo Zinedine Zidane.
Kuwaasi waa ciyaratoyda kaliya ee ku soo wada guulaystay World Cup, Champions League/European Cup iyo Ballon d’Or laakiin Messi iyo Ronaldo ayaa liiskan ku seegay in ayna ku soo guulaysan koobka aduunka inkasta oo ay Champions League iyo Ballon d’Or si wayn u soo qabsadeen.
Warbixinta AS oo looga hadlay sababta ay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ku seegeen ciyaartoyda aduunka ugu soo fiicnaa ayaa lagu yidhi: “Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo way seegeen. Waxay kooxaha iyo abaal marinaha shaqsiga ah ku soo ahaayeen guulaystaal taxane ah, laakiin kooxdan la soo doortay kamay mid noqon maadaama oo ayna waligood Argentina iyo Portugal kula soo guulaysan koobka aduunka ugu sareeya sida ay u kala horeeyaan”.
Laakiin waxaa warbixintan lagu xusay in qiimaynta noocan ah ee lagu salaynayo kaliya koobka aduunka, Champions Leauge iyo Ballon d’Or oo laysku daray in ay calaadad karo ku noqonayso Messi iyo Ronaldo.
Waxa kale oo qiimaynta ciyaartoyda afarta fantastiga iyo todobada layaabka leh ee aan soo sheegnay seegay oo halkan lagu xusay laba ciyaartoy oo reer Brazil ah kuwaas oo kala ah Ronaldo Nazario iyo Rivaldo kuwaas oo ku hadhay hal shuruud.
Ronaldo Nazario iyo Rivaldo waxay liiska magacyada kubbada cagta ugu fiican ku seegeen in ayna ku soo guulaysan Champions League inkasta oo ay koobka aduunka iyo Ballon d’Or soo hanteen.
Waxa kale oo magiciisa la xusay Paolo Maldini,Sergio Ramos iyo Fabio Cannavaro oo aan wada hadalin saddexda arimood ee qiimaynta ugu saraysa laysku siinayay ee Champions Leauge, Ballon d’Or iyo koobka aduunka iyaga oo min laba ka mid ah ku soo guulaystay balse aan dhamaystiran.
Marco van Basten iyo Michel Platini oo min saddex abaal marinta Ballon d’Or ah haysta ayaan waligood xulalkooda Netherlands iyo France koobka aduunka kula soo guulaysan sida ay u kala horeeyaan waxayna ka mid noqdeen ciyaartoyda ugu fiicnayd kubbada cagta balse qiimayntan meel fiican ka waayay.
Waxa kale oo magacyada ciyaartoyda kubbada cagta ugu fiicnaa ee la soo qaaday balse liiska khaaska ah seegay ka mid ah Xavi Hernandez iyo Andres Iniesta kuwaas oo Champions League iyo koobka aduunka ku soo guulaystay balse seegay abala marinta Ballon d’Or.
Waxaa warbixinta wargayska AS ee qiimayntan lagu sheegay in Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ay wali hal talaabo ka hooseeyaan Zinedine Zidane maadaama oo ayna koobka aduunka xulalkooda kula soo guulaysan.
Haddaba akhriste, adiga ahaan waa kuwii ciyaartoyda abid ugu fiicnaa kubbada cagta haddii aad ku qiimayso waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay ku soo guulaysteen.